Malunga nathi -Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd.
Ingxowa yenja yenja
Indebe kunye nesivalo
Indebe yePLA kunye nesiciko
U Imilo yeNdebe
Ifilimu yokuNamathela kokutya
Isisongelo seShishini seShishini
Ezilahlwayo Iziqhano ezinokuboliswa ziintsholongwane
I-Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd inikezelwe kwi-Eco nakwindlela yokuphila esempilweni. Ngo-2017 sisekele uhlobo olutsha-oluhlobo lwe-NATUREPOLY, ngethemba lokwenza umhlaba ube yindawo engcono kwizizukulwana zethu ezizayo. Ukulwa nongcoliseko lweplastiki kubaluleke ngakumbi kunangaphambili, kwaye uNATUREPOLY ukholelwa ekubeni ukhetho oluncinci lunokwenza umahluko omkhulu kwimpilo yethu nakwiiplanethi yethu. Wonke umntu kufuneka enze eyakhe indima ekupheliseni iplastikhi kubomi babo bemihla ngemihla. Izinto ezinokuboliswa ziintsholongwane nezinozinzo, ezinje ngePLA (polyacid) kunye nommoba, zisinceda ukuba sisondele kubomi obungenaziplastiki.
Inkampani yethu lishishini elinobuchwephesha obuphezulu elinophawu NATUREPOLY, egxile kuphando, kwimveliso kunye nokusetyenziswa kweemveliso ezinokuthomalalisa ngokupheleleyo ezinamava atyebileyo ngaphezulu kweminyaka eli-13. U-Huanna ungumnini weefektri ezi-2 ezifumaneka e-Huzhou nase-Shenzhen. Zonke iimveliso zethu zenziwe ngezinto ezinokuboliswa ziintsholongwane, eziqinisekisa ukuba ziyi-100% yecompostable, kwaye ipasile i-EN13432, i-ASTM D6400, i-Australia i-As5810, i-EU kunye nolunye uqinisekiso lokuvavanywa kwamaphepha. Ngomxholo "wobume obungcono, ubomi obungcono", sigcina ukubonelela nge-100% yeemveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane, kunye nendlela yokuphila esempilweni ngokunjalo.
Inkampani i-Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd.
Umthengisi wezisombululo ezinokuboliswa ziintsholongwane iminyaka eli-13
Ingca enokuboliswa ziintsholongwane
Zokusika ezinokuboliswa ziintsholongwane
Indebe enokuboliswa ziintsholongwane
Ingxowa enokuboliswa ziintsholongwane
Izinto eziluhlaza ezinokuboliswa ziintsholongwane
IINZUZO ZETHU EZIPHAMBILI
1.Over 13 iminyaka yamava lemveliso
Inkampani yethu ibiphuhlisa kwaye ivelisa iimveliso ezinokuboliswa ziintsholongwane ngaphezulu kweminyaka eyi-13. Thina ikakhulu kumazwe angaphandle ezinokuboliswa ziintsholongwane, compostable kwaye zinokuphindaphindwa tableware, packagings ngentando yakho. I-R & D yethu inokuvelisa izinto ezingaphezu kwe-10 rhoqo ngonyaka kunye ne-80% yeemveliso zethu ezithunyelwa ngaphandle.
2. Kugunyaziswe yimibutho yovavanyo egunyazisiweyo yamanye amazwe
KWE-NATUREPOLY, ukufuna umgangatho bekusoloko kuyeyona nto iphambili. Iimveliso zethu zinikwe izatifikethi zomgangatho wamazwe aphesheya njenge-EU EN13432, ASTM D6400, Australia AS5810, engqina ukuba UNATUREPOLY yi-100% yokubola kwaye inokubola.
Inkonzo yabathengi eyi-3 kunye nokuhanjiswa okukhawulezayo
Ngeziseko ezi-2 zokuvelisa e-China, sinokuphendula ngokukhawuleza kwiimfuno zabathengi. Abathengisi bethu abanamava banamava kwaye banomdla wokuphendula yonke imibuzo yakho. Sinikezela ngokuhanjiswa okuphendulayo nokukhuselekileyo kwemiyalelo yabathengi kuyo nayiphi na indawo efunwa ngabo kwihlabathi liphela.
Igumbi 810, No. 1958, North Zhongshan Road, Putuo District, Shanghai, China, 200063
Ukungenelela noMsunguli weNaturepoly uLuna ab ...
Zingaphi iiplastikhi esizityayo ...
Iinyani malunga neplastiki enokutsha